Recipients of illegal orders in Myanmar should contact investigative mechanism - Aliran
Home Myanmar Watch Recipients of illegal orders in Myanmar should contact investigative mechanism
The Independent Investigative Mechanism for Myanmar is closely following events since the Tatmadaw’s seizure of power in February 2021 and collecting evidence regarding arbitrary arrests, torture, enforced disappearances and the use of force, including lethal force, against those peacefully opposing the coup.
Nicholas Koumjian, the head of the mechanism, has worked in seven different international courts over the last twenty years and handled cases that include the trials of Charles Taylor, the President of Liberia, and Nuon Chea and Khieu Samphan, top leaders of the Khmer Rouge.
According to Koumjian, “The persons most responsible for the most serious international crimes are usually those in high leadership positions. They are not the ones who physically perpetrate the crimes and often are not even present at the locations where the crimes are committed. To prove their responsibility requires evidence of reports received, orders given and how policies were set. This is normally not evidence that can be provided by the victims, but rather requires that those who received or were aware of illegal orders or policies reveal the truth. I encourage those who have such information to contact the Mechanism.”
Persons providing information to the mechanism are encouraged to do so safely and with an abundance of caution. The mechanism recommends using the following secure means of communication – downloading Signal and using its message service to contact the mechanism at +41 76 691 12 08 or usingaProtonMail account and sending the message to [email protected]
Your safety is of utmost importance to the mechanism, therefore if at any time you believe it may be unsafe to share information via secure means of communication, please refrain until it is safe to do so.
The Independent Investigative Mechanism for Myanmar was created by the UN Human Rights Council to collect evidence of the most serious international crimes and violations of international law committed in Myanmar. The mechanism is further mandated to build case files that could facilitate criminal proceedings in national, regional or international courts in order to hold individuals responsible for such crimes. – UN Human Rights, Bangkok
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့
ယန္တရားအနေနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလက တပ်မတော် အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပွားနေသော အဖြစ်အပျက်များကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေပြီး၊ စိတ်ထင်သလို ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်း၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း၊ အစဖျောက်ခြင်းနှင့် အာဏာသိမ်းမှုကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများအား သေစေလောက်သော နည်းများနှင့် အပါအဝင်၊ အင်အားသုံးကာ ဖြိုခွဲခြင်း စသည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သော အထောက်အထားများကို စုဆောင်းလျက်ရှိပါသည်။
ယန္တရား၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ၊ နီကိုလတ်စ်ခွန်ဂျန်သည် လွန်ခဲ့သော အနှစ်(၂၀)အတွင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး (၇)ရုံးတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး၊ လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံသမ္မတဖြစ်သူ ချားစ်တေလာနှင့် ခမာနီ (Khmer Rouge) ၏ ထိပ်သီးခေါင်း‌ဆောင်များ ဖြစ်ကြသော Nuon Chea နှင့် Khieu Samphan တို့၏ ရုံးတင်စစ်ဆေးချက်များ အပါအဝင်၊ စသည့်အမှုတွဲများကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ မစ္စတာခွန်ဂျန်က ပြောကြားသည်မှာ “အလေးနက်ဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုများအတွက် တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်သူများမှာ များသောအားဖြင့် ထိပ်သီးအာဏာပိုင်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့က ရာဇဝတ်မှုတွေကို တိုက်ရိုက် လက်နှင့် ကျူးလွန်သူတွေမဟုတ်ကြဘဲ၊ ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်နေရာတွေမှာ လူကိုယ်တိုင်တောင် ပါဝင်ရောက်ရှိနေကြသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားရှိကြောင်း သက်သေပြဖို့က လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတွေ၊ ပေးခဲ့တဲ့ အမိန့်တွေနဲ့ မူဝါဒတွေကို ဘယ်လို ပြဌာန်းခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေ လိုပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေက များသောအားဖြင့် အနစ်နာခံရသူတွေမှ ပေးပို့နိုင်တဲ့ အထောက်အထားတွေ မဟုတ်တဲ့အတွက်၊ တရားမဝင်အမိန့်တွေနဲ့ မူဝါဒတွေကို လက်ခံရရှိခဲ့သူတွေ၊ သိတဲ့သူတွေက အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ပြောဆိုဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုအချက်အလက် အကြောင်းအရာတွေကို သိရှိသူတွေက ယန္တရားသို့ ဆက်သွယ်ပေးပါရန် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အားပေးလိုပါတယ်။”
ယန္တရားကို အချက်အလက်ပေးပို့သူများသည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် လုံလုံခြုံခြုံဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သတိဝီရိယကြီးမားစွာဖြင့် လုပ်ကိုင်ရန် အားပေးလိုပါသည်။ အောက်ပါ လုံခြုံသော ဆက်သွယ်ရေး လိုင်းများအား အသုံးပြုရန် ယန္တရားက အကြံပြုလိုပါသည်။ ဆစ်ဂနယ်‌ (Signal) အပ်(app)ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီး၊ ယန္တရားထံသို့ ဖုန်းနံပါတ် +၄၁ ၇၆ ၆၉၁ ၁၂၀၈ အား မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ်၊ ပရိုတွန်မေး (Protonmail) ကို အသုံးပြုပြီး [email protected] သို့ အီးမေးပို့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ပါ။ လူကြီးမင်းတို့၏ လုံခြုံရေးသည် ယန္တရားအတွက် အရေးအကြီးဆုံးသော အရာဖြစ်သောကြောင့်၊ ဘယ်အချိန်မဆို အချက်အလက်မျှဝေရန် လုံခြုံမှုမရှိဟု ယူဆလျှင်၊ မျှဝေခြင်းမလုပ်သေးဘဲ၊ လုံခြုံစိတ်ချရသည့်အချိန်မှသာ ဆက်သွယ်ရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကျူးလွန်ခဲ့သော အကြီးလေးဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုများနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုများ၏ သက်သေအထောက်အထားများအား စုဆောင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယန္တရားကို ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတွင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခုံရုံးများတွင် ထိုရာဇဝတ်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်များကို တာဝန်ခံစေနိုင်မည့် ရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ချက်များအား လွယ်ကူချောမွတ်စေရန် အထောက်အကူပြုနိုင်သော အမှုတွဲများကို ပြင်ဆင်ရန်လည်း ယန္တရားကို ဆက်လက် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ခဲ့သည်။